SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ona zvakanakira kudzidza. Imbovhura pfungwa dzako. Iye zvino unogona kuona sokuti zvinhu zvakawanda zvauri kudzidza hazvishandi muupenyu hwako. Zvinogona kunge zvakadaro hazvo, asi kudzidza zvinhu zvakasiyana-siyana kuchakubatsira kuti unzwisise zvinhu muupenyu. Zvichakubatsira kuti uve “ zvinhu zvose kuvanhu vemarudzi ose, ” wova nounyanzvi hwokutaura nevanhu vane zivo yakasiyana-siyana uye vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana. (1 VaKorinde 9:22) Chinonyanya kukosha ndechokuti uchakwanisa kuwedzera unyanzvi hwako hwokushandisa pfungwa, chinova chinhu chinokosha chichazokubatsira mune ramangwana.
Usazviona seusingabatsiri. Chikoro chinogona kubudisa matarenda anga akavanzwa. Pauro akanyorera Timoti kuti: ‘ Kuchidzira chipo chaMwari chiri mauri sezvinoitwa moto. ’ (2 Timoti 1:6) Izvi zvinoratidza kuti Timoti akanga apiwa chipo chomudzimu mutsvene. Asi “chipo” chake chaifanira kushandirwa kuti chibude. Zviri pachena kuti kugona muchikoro hachisi chipo chinongoerekana chapiwa munhu naMwari. Asi kuti mumwe nomumwe ane tarenda rake. Chikoro chinogona kukubatsira kuti uone matarenda awanga usingazivi kuti unawo uye wobva watoashandisa.